Muchena Mambokadzi | MyWeedSeeds.com
Muchena Mambokadzi mbanje muchinjikwa pakati peiyo Chirikadzi Chena inopembererwa nemamwe marudzi asingazivikanwe eWhite. Mageneti ake anovimbisa masimba akasarudzika uye kuwanda kweTC makristasi uye nebwe. Muchena Mambokadzi akadzivirirwa achabereka goho rinoshamisa kana akachengetwa zvakanaka. Iye wepakati pakureba, asi anokura pakati cola (pamusoro bud) iyo inoshamisa kwazvo, yakareba uye gobvu, yakatakurwa nemari yakawanda yeinonamira resini uye THC makristasi. Mabukira ake anofashukira zvekuti anoita kunge chando kana mangoda-akazara. Kana iwe uri wechokwadi connoisseur, iwe uchazoda kukura uyu wakasarudzika chirimwa. Paanenge achikura, White Queen inopa munhuwi wakanaka, wemaruva neinonaka. Kana iwe ukamubata mabukira, kunhuhwirira kunova nesimba rakasimba. Iko kuravira kwake kunoenderana nekunhuhwirira kwake, maruva matsva ari pasi peakaiswa nezvinonhuwira. Utsi hweWhite Queen hwakapfava uye hunyengeri nehurefu hunozoita kuti utakwe nematombo, asi unosanganisira kutandara kunosimudzira. Kukwirira kwake kunoita kuti ave nesarudzo yakakurumbira yekudzora kushushikana.